DaawoTaageere Man City Ah Oo Goobta Saxaafada Wembley Stadium Aflagaado Ku Gaystay Isaga Oo Ka Cabanaya Mohamed Salah. - Gool24.Net
Tababaraha Manchester City ee Pep Guardiola ayaa hore saxaafada Ingiriiska ugu eedeeyay in ayna kooxdiisa City siin wixii ay uga qalantay isaga oo hore u qiyaasa waxa dhici karayay haddii ay koobka Premier league u waayi lahaayeen Liverpool.
Laakiin cabashada Manchester City ayaan Guardiola oo kaliya ku koobnayn, waxaana goobta saxaafada ee Wembley Stadium soo jabsaday taageere qiiraysan oo Man City ah si uu cabasho uga muujiyo Mohamed Salah.
Markii ay Man City ku guulaysatay koobka FA Cupka, waxa uu taageero cadhaysani soo galay goobta “Press Box’ ee saxaafada halkaas oo uu aflagaado ugu gaystay warbaahinta isla markaana uu u sheegay in ay Mohamed Salah boggagooda hore ku soo qoraan.
Guardiola ayaa dhawaan sheegay in ayna la dagaalami karin taariikhda Liverpool iyo Man City waxayna taasi hadda cadho ku abuurtay jamaahiirta Man City oo aaminsan in ayna warbaahinta Ingiriiska ka helin wixii ay uga qalmeen.
Taageeraha Man City ee goobta saxaafada Wembley Stadium soo galay ayaa erayo aflagaado ah si cadho leh ugu qaylinayay waxaana ka mid ahaa: ” Waxaanu ku guulaysanay f***ing Treble (saddexda koob), ma jiro hal qof oo waligii ka hor sameeyay”.
“Laakiin dhamaantiin (saxaafada England) waxaad boggagiina hore ee f***ing ah barri soo dhigi doontaan Mohamed Salah….. City!, City!, City!” wuxuuna taageerahani muujiyay cadhada ay City ka qabto warbaahinta England.
Laakiin markii muuqaalkani uu baraha bulshada ka soo muuqday jamaahiirta Liverpool ayaa taageerahan ugu maadsaday cadhada uu muujiyay.
Waxay jamaahiirta Liverpool arintan kaga falceliyeen in xataa iyada oo Man City saddexda koob ku guulaysatay ay haddana wali ka fikirayaan Liverpool.
Jamaahiirta Man City ee England ayayna ku koobnayn cabashada in kooxdooda aan wax badan laga qorin iyaga oo aan jeclaysan in kooxaha Liverpool iyo Man United ay wali yihiin kooxaha ka wararka badan iyaga oo xataa koobabkii England kuwada guulaystay.
Guardiola ayaan qarsan kadib markii uu dhawaan saxaafada ka hor qirtay in Liverpool iyo Man United yihiin kooxaha Premier League ugu waa wayn oo ay taas taariikhdu sheegayso balse waxa uu ku dooday in ay talaabooyin qaadayaan.
Halkan ka daawo qaabkii uu taageeraha Man City ahi ku soo galay goobta saxaafada iyo waliba cadhadii waynayd ee uu ka muujiyay in ayna kooxdiisa uga hadlin sida ay Mohamed Salah uga hadlaan.